Pabrikan'ny hafanana hafanana ambany, mpamokatra mpamokatra hafanana hafanana ambany
-25 Degree EVI Low Heat Ambient Temperature Pump
SolarShine Low- Ambient- Temperature air Source Heat Pump Heating + Refrigeration Fananganana toha-pahefana roa tonta dia natao ho an'ny fanamafisana afovoan'ny faritra mangatsiaka, fanafanana ao an-trano ary rano mafana afovoan'ny orinasa sy andrim-panjakana samihafa.
3HP-30HP Low Temperature Ambient Temperature Air Source Units
Ny Pump Solar Heat Ambient Temperature an'ny SolarShine dia natao ho an'ny fanafanana rano mafana / fanamafisana ny tany / fanamainana sy fancoil…. afaka miasa ambanin'ny- 25 mari-pana ambany- 25 ° C, manana hery 3Hp- 30Hp misy isika.
Kitapo hafanana sy fampangatsiahana ho an'ny rano mafana sy ny fanamafisana ny gorodona na ny fampangatsiahana
SolarShine Low- Ambient- Temperature air source Energy dia natao ho an'ny faritra mafana amin'ny toetrandro any avaratra ho an'ny fanamafisana ny gorodona, fanafanana afovoany, fanafanana ao an-trano ary rano mafana afovoany amin'ny orinasa sy andrim-panjakana samihafa.
Paompy hafanana ambany haavo 3HP ho an'ny faritra mangatsiaka
Ny paompy hafanan'ny mari-pana momba ny mari-pana 3HP dia afaka miasa ara-dalàna ao amin'ny tontolo iainana maripana ambany - 25 ℃ ， mety amin'ny faritra iainana mangatsiaka.
Ny mpankafy an'habakabaka amin'ny paompy hafanana hafanana maripana ambany dia mandray compressor amin'ny dingana roa miaraka amin'ny fahaizany mitsentsitra lehibe ary manana fahaiza-manao lehibe, mba hahafahany miasa amin'ny faritra iva ary manome hafanana, fanamafisana ny tany ary rano mafana ho an'ny faritra ambany mari-pana.
Paompy hafanana 5HP ambany ambany
Ny teknolojia paompy hafanana angovo an'habakabaka dia tian'ny mpanjifa noho ny tombotsoany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny angovo, fiarovana ary fampiononana. SolarShine's 45000BTU 5HP ultra low ambient hafanana hafanana paompy afaka miasa ihany koa amin'ny -25 degre, izay mamaha ny olana fa ny angovo rivotra hafanana paompy hafanana tsy afaka miasa noho ny ambany tontolo iainana.
Paompy hafanana ambany 7HP ambany
SolarShine's 7HP Low ambient hafanana rivotra angovo hafanana paompy hafanana afaka mamokatra hafanana tsara na dia eo amin'ny tontolon'ny -25 degre. Tsy voafetran'ny tontolo iainana maripana ambany izy, safidy hendry amin'ny fanafanana, rano mafana ary fanafanana gorodona amin'ny faritra mangatsiaka.
Paompy hafanana hafanana ambany 10HP
Paompy hafanana hafanana ambany avy amin'ny SolarShine 10HP manana ny tombony amin'ny fisarahana rano sy herinaratra, tsy misy lasantsy fako, tsy misy residu residure, azo antoka sy azo antoka, avo fahombiazana, fitsitsiana angovo ary fiarovana tontolo iainana maitso. Miasa hatrany amin'ny mari-pana ambany - 25℃
Paompy hafanana ambany loharano iainana 15HP ambany
SolarShine 15HP Low Ambient Temperature Air Source Heat Pump dia manana tombony fa tsy misy etona fako, tsy misy sisa tavela, fisarahana rano sy herinaratra, azo itokisana sy azo antoka, fahombiazana lehibe, fitsitsiana angovo ary fiarovana tontolo iainana maitso.
Paompy hafanana ambany haavo 20HP ambany
SolarShine 20HP Low Ambient Temperature Heat Pump dia manana tombony amin'ny fisarahana rano sy herinaratra, tsy misy entona fako, tsy misy residu, azo antoka sy azo antoka, mahomby be, mitsitsy angovo ary fiarovana tontolo iainana maitso. Miasà hatrany amin'ny mari-pana ambany - 25 ℃
25HP Low Heat Ambient Temperature Pump ho an'ny hopitaly
SolarShine's 25Ny paompy hafanana hafanana HP Low ambient dia afaka mamokatra hafanana tsara na dia eo amin'ny tontolo -25 degre aza. Tsy voafetran'ny tontolo iainana maripana ambany izy, safidy hendry amin'ny fanafanana, rano mafana ary fanafanana gorodona amin'ny faritra mangatsiaka.